Bayern Munich ayaa dirqi kaga fakatay kooxda Lyon iyadoo runtii nasiibka u hiiliyey… – Hagaag.com
Bayern Munich ayaa dirqi kaga fakatay kooxda Lyon iyadoo runtii nasiibka u hiiliyey…
Posted on 20 Agoosto 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Tababaraha kooxda Bayern Munich Hans Flick ayaa sheegay in kooxdiisu ay u baahantahay xoogaa nasiib iyo kartida Serge Gnabry si ay uga badbaadaan cadaadiskii hore ee kooxda Olympique Lyon, isla markaana uu u jaray ticket-kii finalka Champions League ka dib guushii ay 3-0 ee Arbacadii.
Gnabry ayaa dhaliyay labo gool ka hor inta uusan Robert Lewandowski ku darin goolka seddexaad labo daqiiqo ka hor dhamaadka ciyaarta, laakiin Bayern ayaa ka badbaaday cadaadiskii hore ee kooxda reer France, kaasoo ka fakaday goolal loo fishay inay dhashaan.
“Waxay ahayd ciyaar adag waxaanan ogayn inay sidan oo kale noqonayso,” Lyon ayaa soo gudbisay heer ciyaareed aad u sareeya, waxayna aad u cadaadiyeen Bayern, laakin ugu dambeyntii waxaan awoodnay inaan ka badbaadno inagoo xoogaa helnay nasiib khaas ahaan qeybtii hore ee ciyaarta ayuu Flick ku yiri shir-jaraa’id.
Gnabry ayaa dhaliyay daqiiqadihii 18aad iyo 33aad isaga oo kooxdiisa sidaasi ugu dhiibay hoggaanka, laakiin qaab ciyaareedkiisa ayaa aad uga hooseeya kii 8-2 ay kaga badiyeen Barcelona Jimcihii hore.
“Wax qabadka shaqsiyeed ee Serge ayaa naga fujiyey naqaska. Goolka uu dhaliyey wuxuu ahaa mid aad u sareeya,” ayuu yiri Flick.
Bayern ayaa la ciyaari doonta finalka Axada soo socota kooxda Paris Saint-Germain, oo 3-0 ku garaacday Leipzig Talaadadii.
Flick, oo kooxdiisu aysan guuldaro kala kulmin tartamada oo dhan 2020, ayaa yiri, “way cadahay in aanu si fiican u difaacin sidii caadiga ahayd. Waxaan haatan diirada saaraynaa Paris St Germain. Waxaan rabnaa inaan soo bandhigno wax walba oo aan haysano. Ma dareensani in ciyaartii weerarka ee Lyon inay ka hooseyso mida PSG. “